#StopTheCrackdownVN: Fifanoloran-Tànana Manerantany Hitakiana Fiarovana ny Zon’Olombelona Ao Vietnam · Global Voices teny Malagasy
#StopTheCrackdownVN: Fifanoloran-Tànana Manerantany Hitakiana Fiarovana ny Zon'Olombelona Ao Vietnam
Voadika ny 29 Novambra 2017 2:40 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, Español, বাংলা, Magyar, Português, English
Takian'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona ny hamoahana ireo 165 mifonja ao Vietnam noho ny fahatsiarovantenany.
Nanomboka andianà fandraisana andraikitra ireo fikambanana fiarahamonina sivily erantany (CSOs) mba hanasongadinana ny toedraharaha manahirana momba ny zon'olombelona ao Vietnam
Angondrakitra ety anaty aterineto momba ireo migadra noho ny fahatsiarovantena
Ny fanentanana NOW! (IZAO ANKEHITRINY IZAO!), natsangan'ireo fikambanana 14 mpiaro zon'olombelona, dia miantso ny hamoahana avy hatrany ireo 165 mìgadra noho ny fahatsiarovantenany ao Vietnam. Misy angondrakitra voafakafaka tsara napetrak'ireo fikambanana ety anaty aterineto ahitàna ny mahakasika ireo gadraina noho ny fahatsiarovantenany ao Vietnam..
Araka ny hita ao anatin'ilay angondrakira, hita ao anaty lisitry ny gadra noho ny fahatsiarovantena ao Vietnam ny bilaogera, ny mpanao gazety, ny mpiaro tontolo iainana, ny mpianatra, ny tantsaha ary ireo mpiasa nosamborina noho ny fikatrohana am-pilaminana nataon'izy ireny.
Izy rehetra miaraka, ireny lehilahy sy vehivavy ireny dia manefa 955 taona sy volana iray any am-ponja, arahan'ny 204 taona tsy fahafahana mivoaka ny tranony.
Ny maro amin'izy ireny dia voaheloka ho nanitsakitsaka ny Andininy faha-79 amin'ny lalàna mifehy ny heloka bevava “fikotrehana fanonganana fanjakàna”, sy ny andininy faha-88, “manao fampielezankevitra manohitra ny fanjakàna”.
Saingy ireo Mpiaro ny Zo Sivily, iray amin'ireo mpikambana ao anatin'ny fanentanana NOW!, dia nilaza fa mety mbola avo kokoa ny isan'ireo nogadraina noho ny fahatsiarovantenany :
Ny fifehezana azo lazaina ho manontolo ataon'ny governemanta amin'ny media ao Vietnam, ary ny tsiambaratelo manodidina ireo fisamborana sy famonjàna olona sasantsasany noho ny fahatsiarovantena, indrindra fa ireo avy amin'ny fokon'ny vitsy an'isa, dia midika fa matetika dia sarotra ny mahazo vaovao momba ireo raharahan'ny voafonja noho ny fahatsiarovantena ireo, ary tsy ho vita ny hamaritra tanteraka hoe efa fantatra daholo ireo migadra noho ny fahatsiarovantena ao amin'ilay firenena.
Taratasy ho an'ireo mpitarika ny APEC
Nisy taratasy iray nisokatra nosoniavin'ireo CSOs 17 nanainga ireo mpitarika izay nanatrika ilay fihanonambe 2017 nataon'ny “Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)” tao Vietnam mba hanairana ny saina momba ny olan'ny fanitsakitsahana zon'olombelona ataon'ny tafi-panjakana ao Vietnam. Nampahafantarin'ilay taratasy ho an'ireo mpitarika ny APEC fa i Vietnam dia nampiditra am-ponja bilaogera sy mpikatroka am-pilaminana miisa 25 raha kely indrindra hatramin'ny taona lasa.
Famoretana mifanohitra amin'ny tanjona ho “Fanorenana Risipo Vaovao, Fikolokoloana Hoavy Ifampizaràna” izay lohahevitra napetraka ho an'ilay fihaonan'ny APEC tamin'ity taona ity. Ny famonjàna tsy misy fitsaràna, ny sivana ary ny herisetra tohanan'ny fanjakàna atao amin'ireo mpikatroka sy mpiaro zon'olombelona dia tsy hoe fotsiny henatra amin'ny maha-olombelona iraisantsika, fa koa fanitsakitsahana mahatsiravina ireo lalàna sy fenitra iraisampirenena momba ny zon'olombelona.
Mino izahay fa tombontsoa goavana ho an'ny APEC sy ny fiombonambe iraisampirenena ny manandratra feo manohitra ireo fanitsakitsahana mihanaka sy tsy miato atao amin'ny zon'olombelona eto Vietnam.
Mandritra izany fotoana izany, i Nguyễn Bảo Nguyên, zanaka vavin'ilay bilaogera mpanohitra, Me Nam (Mother Mushroom / Neny Holatra) dia nanoratra taratasy iray nalefany ho an'i Melania Trump ho fangatahana fanampiana amin'ny hiantohana izay hamotsorana ny reniny. Nanara-dia ny filoha Donald Trump tamin'ny fanatrehany ny fihaonambe APEC tao Vietnam ity Vehivavy Voalohany ao Etazonia ity.
Novakiako tany anaty media sosialy ary fantatro fa hitsidika an'i Vietnam ianao sy ny fianakavianao mandritra ny fihaonambe APEC. Andro vitsy monja miala an'io ny andro nahaterahako. Ary avy eo dia ny andro nahaterahan'ny anadahiko Gấu (vao 4 taona monja) nefa dia hankalaza izany tsy hiaraka amin'ny reniko aho. Tianay fatratra i Neny ary tianay hody an-trano hiaraka aminay fotsiny izao.
Sivy ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona nanomboka ny fanentanana #StopTheCrackdownVN iampangàna ny famoretana ireo mpikatroka sy bilaogera taty anatin'ny volana vitsivitsy, ary ny sazy henjana fampidirana am-ponja nomena ireo mpanakiana ny fitondràna.
Don Le, mpanoratra no sady mpikambana ao amin'ny antoko politika Viet Tan, nanazava ny nampiasàn'ireo manampahefana ilay andininy faha-79 sy 88 ao amin'ny lalàna mba hampanginana ny olom-pirenena:
Miainga amin'ny fahitàny hoe misy torohay mety “hanainga” ny olona hanao fivorivoriana ka hanelingelina ny filaminam-bahoaka sy ny fiarovam-pirenena, ilay lalàna dia manome alàlana ihany koa ny fanjakàna hanivana, hanakana na hanakatona tambajotra mandritry ny fotoana voafetra. Raha ny fandikàn'ny governemanta Vietnamiàna ny fiarovam-pirenena rahateo, dia mbola afaka miomana isika ny hahita fanafihana bebe kokoa sy fanakatonana ikendrena ireo media miasa tena sy ireo bilaogera, ary fisamborana ireo mpanao hetsi-panoherana am-pilaminana.
Na namoaka fanambaràna iray aza ny biraon'ny Koamisaria Ambony ao amin'ny Firenena Mikambana miahy ny Zon'Olombelona, tamin'ny Jolay lasa teo, nanehoany ny ahiahiny momba ny fitazonana am-ponja sy fanenjehana ireo olontsotra mpanao gazety:
Angatahanay ireo manampahefana Vietnamiana mba hamotsotra avy hatrany ireo rehetra nampidirina am-ponja noho ny fampiasàn'izy ireo ny zony haneho hevitra an-kalalahana, ary hanisy fanitsiana amin'ireo lalàna hita mibaribary fa mandringa izay ampiasaina – lazaina fa ho amin'ny fiarovam-pirenena – mba hamoretana ny tsy mitovy hevitra aminy.
Hong Kong (Shina) 4 andro izay
Shina 7 andro izay